Zon'olombelona · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Avrily, 2011
Ejipta: Graffiti – Mba ho Revolisiona Maroloko sy Ho Fahatsiarovana Tsy Maty Vonoina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Avrily 2011
Hatrany amin'ny andro voalohan'ny rovolisiona ejiptiana, naka ny fomba fanaon'ny razambeny ireo mpanao hetsi-panoherana amin'ny fomba fandraketana ireo androm-pandresena sy firavoravoana, fandraketana ireo andron'ny revolisiona eny amin'ireo rindrin'ny Kianjan'i Tahrir ao afovoan'i Caire, ivon'ireo fihetsiketsehana. Tonga ny anjarany, maniry toa anana ny graffiti eraky ny rindrina ao Caire.
Hongria: Ireo rôma ao Gyöngyöspata, nafindra toerana sa nitsangatsangana paka?
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Avrily 2011
Tato ho ato izao dia foiben'ny fifandirana eo amin'ireo rôma sy ny Hongroa ny faritra avaratr'ity firenena ity. Tao Gyöngyöspata, ohatra, fikambanana ivelan'ny tafika no nilahatra iray volana lasa izay, nilaza fa anisan'ireo mpanara-maso ny faritra manodidina, na dia fantatra aza fa avy amin'ny hery farany havanana izy ireo. Tanàna...
Halina, olona efatra no naratra nandritra ny fifanandrinana teo amin'ny foko Hongroà mpikambana ao amin'ny vondrona farany ankavanana Véderő sy ny fokonolona Rôma ao Gyöngyöspata. Mifanohitra be ihany ny voalzan'ny haino aman-jery Hongroà ny amin'izay nahatonga ny ady - samy mandà ny ho tompon'andraikitra nahatonga ny fifandonana ny fokonolona roa tonta.
Pôrtô Rikô: Mitohy ny Adihevitra Momba ny Herisetra ao An-tokantrano
Amerika Latina 28 Avrily 2011
Ao Portô Rikô, nangotraka ny adihevitra mikasika ny herisetra ao an-tokantrano. Bilaogy roa no nanaraka ny didy navoakan'ny Fitsarana an-tampony fa ireo iharan'ny herisetra ao anatin'ny fiarahana tsy ara-dalàna dia tsy voaaron'ny Lalàna 54 manohitra ny herisetra ao an-tokantrano. Ary vao haingana, ny fitsarana ambony ao San Juan (renivohitry ny firenena) no nanapa-kevitra fa tsy voaaron'ny Lalàna 54 ny vehivavy hafa niharan'ny herisetra tao an-tokantrano satria tsy ara-dalàna ny fiarahany tamin'ny olona nanao herisetra azy fa filàna ara-nofo fotsiny.
Pakistana: Ady Atao Amin'ny Taliban Sy Ny Drones
Azia Atsimo 27 Avrily 2011
Alaivo sary an-tsaina ny hoe fiainana ao Pakistan; toerana iray izay ny andro tsy isian'ny mpanao vy very ny ainy na fanafihana drone (fiaramanidina baikoana lavitra) indray no toa zary vaovao, ary any ny vahoaka dia miaina ny isa-minitrany amin'ny tebiteby toy ny dona, hatezerana, fikorontanana ary tsy fahatsapana halemena lalina isanandro.
Nandroaka Mpiasan'ny Fahitalavitra Soedoazy i Azerbaijan
Azerbaijan 27 Avrily 2011
Nitatitra ny The Commitee to Protect Journalists fa nandroaka mpiasan'ny fahitalavitra Soedoazy i Azerbaijan,izay tonga mba haka sary fanadihadiana iray momba ny zon'olombelona eo amin'io firenena io.
Bhutan: Ny Pretra no nanjary nidiran'andro voalohany noho ny Didy mandrara ny fihinana paraky
Azia Atsimo 24 Avrily 2011
Miankina amin'ny hoe ahoana ny fahitanao azy, pretra Bodista no mpandika lalàna voalohany na ny nidiran'andro voalohany amin'ny Didy mandràra ny fihinana paraky any Bhutan izay nanan-kery nanomboka tamin'ny Janoary 2011,ary nogadraina tamin'ny faran'ny volana Janoary raha izy niezaka niditra ny firenena niaraka tamina fonosana paraky fitsako miisa 72 avy any Inde.
Tetikasa “Exploring Taboos”, diaben'ny vehivavy an-tapitrisa
Ejipta 23 Avrily 2011
Noraiketin'ireo gazety malaza ary koa ny vaovao an'olo-tsotra an-tantara ireo zava-niseho nandritra ny revolisiona Ejyptiana, ka nitodika tany amin'ny fampandrosoana izay niteraka ny fionganan'i Hosni Moubarak tamin'ny 11 febroary 2011 avokoa ny mason'izao tontolo izao. Niara nifarimbona ireo bilaogera na ireo mpira-miasa isan-karazany tamin'ny tetikasa Rising Voices tao Ejypta mba hilazalaza...
Mozambika: Noravan'ny polisy tamin-kerisetra ny grevy
Afrika Mainty 22 Avrily 2011
Ny 6 aprily, mpiasa ao amin'ny sampana polisin'ny Repoblikan'i Mozambika – Hery Vonjy Taitra ( Force d'Intervention Rapide) – no nampiasa herisetra mba handrava ny fihetsiketseham-panorenana nataon'ireo mpiasa amina orinasa momba ny Fiarovana olo-tsotra Group Four Security (G4S). Toa hita fa ny G4S dia nampidina ny karaman'ireo mpiasany, ary mitaraina izy...
Madagasikara: Endrika sy habe samihafan'ny sivana
Afrika Mainty 21 Avrily 2011
Ny mpamaham-bolongana Achille52 no mamahavaha ny zavamisy iainan'ny fampahalalam-baovao sy ny fahalalaham-pitenenana eto Madagasikara (fr), izay amoahany amin'ny antsipiriany ny fomba anelingelenana isankarazany ny mpamaham-bolongana (izay efa nohazavain'ny tatitry ny Amnesty International ihany koa). Nambarany ihany koa fa nakatony tsy ho hitan'ny olona ny bolongany rehefa nisy manamboninahitra polisy nilaza taminy fa...